Ahoana ny fomba hampijanonana ny nofinofy be loatra - An-Tsaina
Ny manonofinofy dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanomezana fotoana kely ny sainao haka aina.
Mandreraka ny fiainana. Manana fe-potoana isika any am-piasana, asa fanasan-damba, lovia diovina, ary angamba ankizy enjehina. Avy eo koa ny momba ny vaovao sy ny zava-mitranga rehetra manerantany.
Iza no tsy mila fotoana kely handosirana tsindraindray?
dia i dwayne johnson ilay vatolampy
Samy manao amin'ny fomba sasany ny tsirairay.
Misy fomba mahasalama anaovana izany - toy ny milentika anaty boky, miala sasatra, mijery sarimihetsika, na manao fanatanjahan-tena. Ary misy fomba tsy mahasalama anaovana azy - toy ny alikaola, fidorohana zava-mahadomelina, na fisorohana.
Ireo fomba mahasalama rehetra ireo handosirana kely dia mety tsy salama raha manelingelina ny fahafahanao mitarika ny fiainanao. Rehefa ny fialamboly toy ny famakiana, ny fijerena sarimihetsika, ny lalao video, na ny fanatanjahan-tena no manolo ny andraikitsika dia manomboka manana olana isika.
Tsy misy hafa amin'izany ny manonofinofy.
Tsy misy maharatsy ny fandosirana kely indraindray. Nefa rehefa manomboka manembantsembana ny andraikinao ny nofinofisinao dia miampita ny tsipika mankamin'ny 'Maladaptive Daydreaming.'
Inona ny atao hoe nofinofy maladaptive?
Maladaptive Daydreaming dia toe-tsaina iray izay fantatry ny profesora Eliezer Somer avy amin'ny Oniversiten'i Haifa any Israel. Tsy asongadin'ny DSM-V izy io ary tsy manana drafitra fitsaboana mifandraika amin'izany. Na izany aza, dia ekena ho toy ny olana manakorontana iainan'ny olona izany.
Ny nofinofy ratsy tsy namboarina dia mety nateraky ny zava-nitranga marina izay nahatonga ilay olona hitsoaka izany toe-javatra izany. Ny nofinofy dia mety hiteraka feo, fofona, resaka na zavatra niainana ara-batana.
Ny fambara dia:
- Torimaso mikorontana
- Fanonofinofy miharihary izaitsizy tokoa miaraka amin'ireo singa be pitsiny toy ny endri-tsoratra, tsikombakomba na tsangambato tantara
- Faniriana be loatra hanohy manonofy
- Fihetsiketsehana miverimberina rehefa manonofy
- Mibitsibitsika, miresaka, maneho endrika amin'ny tarehy rehefa manonofinofy
- Ny nofinofy ateraky ny zava-misy marina
Manenina aho fa nandao ny fianakaviako ho an'ny vehivavy hafa
- Fahaiza-manao kilema hanatanterahana asa mahazatra
- Manonofy mandritra ny minitra ka hatramin'ny ora maromaro
Na dia ekena ho toe-pahasalamana ara-tsaina aza dia tsy dia misy fampahalalana marim-pototra momba ny fitsaboana sy ny fandresena azy. Mety ho vokatry ny toe-javatra ratsy eo amin'ny fiainana izay ilana fitsoahan-kevitra ny fiatrehana fihetsem-po amin'ny fanararaotana na trauma mitohy. Izy io koa dia mety ho famantarana ny aretina ara-tsaina hafa na vokatry ny fomba fiaina tsy salama.
Tokony ho takatra ny antony mahatonga azy ireo manonofinofy be mba hahitana vahaolana amin'ny olana.
Fa maninona ianao no manonofy be?
Ny fitadiavana vahaolana dia manomboka amin'ny famantarana ny olana. Azonao fantarina ve ny antony manonofinofy?
Ny sasany manonofinofy mba hiatrehana ny fihetsem-po ary handositra ny fanaintainan'ny tena fiainana. Ny manonofinofy dia mety ho fitsoahana fialan-tsasatra amin'ny fihenjanana na fihetseham-po ratsy hafa izay tsy tian'ny olona atrehana.
Mety ho izany dia fitaovan'ny fahatsapana ho tsara momba ny tenanao na mampitony tena amin'ny fieritreretana ny vokatra mahasoa na tontolon'ny nofinofy izay misy zavatra tsara kokoa noho ny tena fiainana.
Ny olona sasany dia mampiasa azy io ho fitaovana hamitahana ny tenany tsy hahatadidy zavatra maharary. Amin'ny alàlan'ny sary an-tsaina ny tranga mampivadi-po miaraka amin'ny voka-dratsin'izany ho toy ny tranga mampivadi-po miaraka amina vokatra tsara, ilay mpanofinofy dia afaka mamita-tena hino ilay lainga tsara.
Mety ho zavatra tsara izany, saingy tsia. Io karazana fandosirana io dia manakana ny olona tsy ho sitrana amin'izay zavatra ratsy nitranga tamin'ny alàlan'ny fanalavirana azy tanteraka mba hahafahany mivezivezy ary hiverina amin'ny fomba ratsy kokoa.
Diniho izay karazana nofinofy anananao sy ny tanjon'izy ireo. Manelingelina ny tenanao ve ianao? Mialà amin'ny toe-tsaina ratsy tarehy? Mandany fotoana? Sa manao izay hahatsapana ho tsara kokoa?
inona no hatao rehefa ny fitiavana
Inona ireo lamina ao amin'ny nofinofisinao?
Azonao atao ve ny mamantatra ireo lamina manokana amin'ny fomba manonofinofy? Angamba ianao mahita ny sainao milentika any anaty nofinofy rehefa sendra adin-tsaina na fampahalalana sarotra ianao.
Tsy mitombina ny maniry ny handositra ny haratsian'izao tontolo izao mandritra ny fotoana kelikely. Mety ho hitanao fa manomboka mitady hihataka ny sainao raha mijery ny vaovao sy manahy ny amin'ny zava-mitranga tsy voafehinao.
Angamba ny fihenjanana avy any an-tsekoly, an-trano, na fiainam-pianakaviana no mahatonga anao hisintaka. Angamba ianao koa mila fomba famonoana fotoana fotsiny nefa tsy manana zavatra hafa mitranga amin'izao fotoana izao.
Misy fikafika azo fantarina ve rehefa mahita nofinofy ianao?
Mitadiava fomba hiasana manodidina na hampihenana ireo fikafika efa misy.
Mazava ho azy fa mora kokoa noho ny vita ny famonoana olona efa misy. Mety tsy ho azo atao ny manala azy tanteraka, izany hoe esory ny singa ara-pihetseham-po na fanentanana izay mahatonga anao hiala amin'ny nofinofy.
Raha afaka kosa ianao dia tokony. Angamba ianao mahita ny tenanao anaty nofinofy rehefa mijery ny vaovao ho fomba fitsoahana. Azo hanoherana izany raha tsy mijery vaovao ianao.
Ny asa na fifandraisana mampiady saina dia mety ho sarotra ny miala. Na izany aza, mety ilaina izany raha misy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalamanao ara-tsaina ka hatramin'ny fotoana ilanao mandositra matetika.
Ny toe-javatra sasany dia misy poizina fotsiny, ary tsy afaka hiasa tokoa izy ireo raha tsy mahita olana amin'ny zavatra mitranga ilay olona iray hafa. Indraindray izany dia fanapahan-kevitra mahatsiravina tsy maintsy raisinao ho anao sy ho tombontsoanao manokana.
Ampitomboy ny fahatsiarovanao sy ny fahatsiarovanao.
Ny fahatsiarovan-tena dia fitaovana matanjaka amin'ny ady amin'ny nofinofy satria mifantoka amin'ny mifantoka eto sy ankehitriny.
Matetika ny manonofinofy dia aorian'ny mamela ny saintsika hisintaka hiala amintsika ho amin'ny eritreritra lavitra sy ny tantara foronina.
Amin'ny fampiharana ny fahatsiarovan-tena dia miasa mafy amin'ny tany isika amin'izao fotoana izao izay ananantsika amin'izao fotoana izao amin'ny fahafantarana feno izany fotoana izany. Tsy mifantoka amin'izay mety na mety hisy ianao, izay mety na tsy mety hitranga, izay miandry anao na ao aorianao.
Fitsangantsanganana mety ho fomba tsara handehanana amin'ny fanatsarana ny fahatsiarovan-tena. Ny hany ilainao dia mila mandany fotoana hanoratana izay eritreretinao, tsapanao ary tsapanao ankehitriny.
Fomba fanao tsotra izay afaka manampy amin'ny fitahirizana ny sainao amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny fampiharana tsara. Izy io dia ahafahanao mifantoka sy mampivelatra ny fahaizanao mamantatra rehefa miala ny sainao.
Manonofinofy amin'ny fanatsarana ny tena.
Ny nofinofy dia mety ho fitaovana ilaina amin'ny fanatsarana ny tena sy ny fandinihana rehefa ampiasainao amin'ny fomba ifantohana.
Mety tsara raha mampiasa an'io fotoana io ianao mba haka sary an-tsaina ny fiainana tsaratsara kokoa tadiavinao, handinihanao izay sakana eo alohanao, ary inona no tanjona tadiavinao.
fa sary an-tsaina tsara afaka manampy amin'ny famoizam-po sy ny fiasan-doha amin'ny alàlan'ny famelana ny tenanao hidina amin'ny toerana azo antoka izay anao irery ihany ny miditra sy mizaha. Izany dia afaka manampy anao hiala sasatra sy hampitony ny tenanao raha sendra olana ianao.
Diniho ny fanampiana matihanina.
Misy ambaratonga samihafa amin'ny nofinofy izay manomboka amin'ny mahasoa ka hatramin'ny tsy fahasalamana. Ara-dalàna ny manonofinofy matetika. Tsy ara-dalàna na mahasalama ny manonofinofy manelingelina ny fahafahanao mitarika ny fiainanao.
Mety ho azonao atao ny miatrika ny manonofinofy antonony toy ny fitsoahan-tena samirery, fa mety hiteraka olana lehibe kokoa noho izany mety mila fanampiana matihanina ianao.
Raha hitanao fa mikorontana tsy tapaka amin'ny nofinofy ny fiainanao, dia mety ny miresaka amin'ny matihanina momba ny fahasalamana ara-tsaina momba ny zavatra iainanao. Tsindrio eto raha hahita iray.
Fihetsiketsehana ara-pientanam-po: Ahoana ny fomba hamantarana, hahatakarana ary hiatrehana ny anao
Ahoana ny fomba hampijanonana ny ahiahy amin'ny ho avy: toro-hevitra mahomby 6!
Dingana tsotra 7 tsy hamela ny zavatra hanakorontana anao
ny fomba hiatrehana olona mahery
ny fomba hanangana fetra eo amin'ny fifandraisana
Nahoana no zava-dehibe raha mizaha
ny fomba tsy hiraharaha izay eritreritry ny olona sy ny tenanao